ယူရို ၂၀၂၁ ဘောလုံးတွင်ထူးခြားသော လက္ခဏာများရှိပါသလား? - Beteuro2021
ယူရို ၂၀၂၁ ဘောလုံး ၎င်းသည်ယူရို ၂၀၂၁ ပြိုင်ပွဲ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ပရိတ်သတ်အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော ဤတရားဝင်ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ထူးခြားချက်များက ဘာပါလဲ ? ဆိုသည့် မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်း၏အဖြကို အောက်ပါ ဆောင်းပါးမှာ beteuro2021 နှင့်အတူ အဖြေရှာလိုက်ကြရအောင်။
ယူရို ဘောလုံး ၂၀၂၁ အကြောင်း
ယူရိုဘောလုံးသည်တရားဝင်ပွဲများအတွက်အဆုံးမဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ဒါတင်သာမကပါဘူး။၎င်းသည်ပြိုင်ပွဲစတင်တည်ထောင်ခြင်း၏နှစ် ၆၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်ကျင်းပသောကြောင့် ၂၀၂၁ ယူရိုသည် ပို၍ ထူးခြားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဘောလုံး၏ဒီဇိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီဘောလုံးများထက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရစေသည်။
ယူရို ၂၀၂၁ ဘောလုံးကို Adidas Uniforia ဟုတရားဝင်ခေါ်ဆိုထားသည်။ ၎င်းသည်အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်၊ တောက်ပသောပန်းရောင်နှင့်ပန်းရောင်အပြာရောင်အစင်းများဖြင့်ရောင်စုံဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်အဖြူရောင်နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဘောလုံးကိုတစ်လျှောက်ပြေးဆွဲနေသည့်အနက်ရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းများသည်နယ်နိမိတ်များကိုမှုန်ဝါးစေခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲ၏အပြန်အလှန်ကစားသည့်ပုံစံကိုပြသသည်။ ထို့အပြင်အနက်ရောင်လိုင်းများသည်ပြိုင်ပွဲ၏ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်ပြသပြီးတောက်ပသောအလင်းများဖြင့်လောင်ကျွမ်းကာယဉ်ကျေးမှုများကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ထူးခြားသောအနုပညာနှင့် ဘောလုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒ့အပြင် ဘောလုံးပေါ်ကလိုဂိုမှာ အနက်ရောင် ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ယူရို ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးအလှည့်ကို လက်ခံသည့်အိမ်ထောင်စုအားလုံး၏ပထဝီအနေအထားအရသိမ်မွေ့သောမီးခိုးရောင်စာသားဖြင့်လည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကယူရို ၂၀၂၁ ဟာစည်းလုံးမှုစွမ်းအားကိုပြသဖို့နဲ့ဥရောပနိုင်ငံအားလုံးရဲ့အားကစားစိတ်ဓာတ်ကိုပြသဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ယူရို ၂၀၂၁ ဘောလုံးသည်ဘောလုံးနှင့်အားကစားများကိုဂုဏ်ပြုသောသင်္ကေတဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုက်ကြီး ၇ တိုက်ကို ပိုမို ရင်းနှီးနီးကပ်စေရန်ကူညီသည်။ Uniforia နှင့်အတူဘောလုံးသည်လူတိုင်းအတွက်အားကစားဖြစ်သည်။
ယူအက်စ် ၂၀၂၁ ဘောလုံး၏ Adidas Uniforia ဘောလုံး၏ပုံသဏ္ဏန်သည်ရုရှားတွင်ကျင်းပသည့် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား၏တရားဝင်ဘောလုံးနှင့်မတူပါ။ ထူးခြားချက်မှာဘောလုံးသည်၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိသေချာစွာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရယူရို ၂၀၂၁ ဘောလုံးသည်အလွန်ကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောအကန့်အသတ်ရှိသည်။
တရားဝင်ယူရို ၂၀၂၁ ဘောလုံးသတ်မှတ်ချက်များ
ဘောလုံးထည်ကို 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဘောလုံးအရောင်များမျာ – အဖြူ၊ အနက်၊နီယွန်အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်၊ cyan အလင်းရောင်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အတူမျှဝေလိုသောတရားဝင်ယူရို ၂၀၂၁ ရာသီဘောလုံးကိုမှတ်သားထိုက်သည်။ အကယ်၍ သင် Euro 2021 ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါက thebet Euro 2021ကိုအနိုင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိရှိလိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးများကိုကြည့်ရှုပါ။